पायल्स भनेको के हो ? पायल्स भएमा के खाने, के नखाने ? - Lekbesi Khabar
पानी प्रशस्त पिउने, हरियो सागपात काँचै खाने, फलफुल खाने, चोकरसहितको गहुँको पिठो, रोटी, जौ, ब्राउन राइस, रहर तथा मुगको दाल खाने । खानासंग मुला, काँक्रो, गाँजर खाने, नरिबल, अनार, स्याउ, बेलजस्ता फलफुल, करेला, धनिया, लौका खानु राम्रो हुन्छ । कब्जियत हुन नदिने, हरेक दिन शारीरिक व्यायाम गर्ने, आफ्नो पिसाबले गद्द्वार धुने, एक गिलास गाइको दुधमा आधा कागती निचोरेर तुरुन्त खाँदा कसै कसैलाई रगत तथा पिप आउने जस्ता समस्या ठीक भएका छन् । नरिवलको बाहिरको जटा डढाएर एक चिम्टी खरानी र दुबोको २ चम्चा रस घोलेर बिहान बेलुका एक गिलास मनतातो पानीसंग खाँदा सन्चो भएको पाइएको छ ।
पायल्सका बिरामीले हप्तामा एकपटक वा आवश्यकताअनुसार पेट सफा गराउने, पेट हल्का राखी उपचार गर्नु एकदम राम्रों विधि हो । एकदम कम र हल्का खाने, शरीरले पचाउन सक्ने गरी खानुपर्छ । हप्तामा दुई तीनदिन शुरुमा रोग बढेको अवस्थामा एकदिन बिराएर फलफूलको रस वा पानीमात्र खाएर बस्नुपर्छ । डाक्टरको सल्लाहअनुसार केही राम्रो भएपछि बिस्तारै काँचै खानेकुरा खाएर बस्ने, पेटलाई हलुंगो बनाएर औषधि गर्दै जाने । यस्तै, पिपलको बोक्रा मसिनो बनाएर सुकाएर पिस्ने, शुद्ध तोरीको तेलमा मिसाएर नियमित बिहानबेलुकी मासु बढेको ठाउमा एकदेखि तीन महिनासम लगाएमा बिस्तारै सुक्दै जान्छ ।
६ माघ २०७६, सोमबार २१:४५ January 20, 2020
पदको गरिमा जोगाउन सफल भएँ: तुम्बाहाङफे
के हो यूरिक एसिड ? कसरी बाच्ने
नेपालमा थप १५७३ जना कोरोना संक्रमित थपिए: १० काे मृत्यु
चटपटे बनाएर नदिएको निहुँमा बालिकाको हत्या !
अमेरिकामा पानीमा मस्तिष्क खाने सूक्ष्म जीव फेला, धाराको पानी प्रयोग नगर्न चेतावनी
सुनको भाउ ह्वात्तै घट्याे !
युथ एशोसिएशन यूकेद्वारा ज्वालामुखी गाउँपालिका ७ मा ५२ बिपन्न परिवारलाई राहत वितरण !